Ukunyuswa kwehlobo-iZiko leMfundo leelwimi ezimbini
Ikhaya Unikezo olulodwaUkunyuswa kwehlobo
Ihlobo elishushu… Unyuselo olushushu !!!
Ukunyuswa kwehlobo kwandisiwe kwi-BEI! Ungaphoswa lithuba lakho Qala uhambo lwakho lokufunda ngoku!
Iiklasi ezikwi-Intanethi okanye kwi-On-campus.
Ikhampasi encinci neKhuselekileyo
Iminyaka engama-39 yokuGqwesa !!!
* Unikelo olukhethekileyo-Imigaqo nemiqathango eyahlukeneyo inokusebenza